कोरोनाविरुद्धको खोपका समाचारले आममानिसमा खुसी छाएको छ । विगत एक वर्षदेखि कोरोनाको महामारीमा पिल्सिएका नागरिक खुसी हुनु स्वाभाविक हो । अमेरिकाका दुईवटा औषधि निर्माण कम्पनी, भारत, चीन, रुस, ब्राजिललगायत देशमा भ्याक्सिन निर्माणको काम भइरहेको छ । अमेरिकी कम्पनी फाइजरले जर्मन बायोएनटेकसँग मिलेर बनाएको भ्याक्सिन, अमेरिकी कम्पनी मोडेर्ना र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले एक्ट्राजेनेकासँग मिलेर बनाएको भ्याक्सिनको प्रभावकारिता धेरै देखिएको छ । खोपको प्रभावकारिता बढेसँगै नेपाल सरकारले पनि ७२ प्रतिशत जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । सरकारले खोप नेपालमा पनि ल्याउने गरी तयारी तीव्र बनाएको जनाएको छ । पहिलो चरणमा कोभ्याक्स कार्यक्रमबाट प्रत्येक देशका २० प्रतिशत जनताका लागि ६० लाख डोज भ्याक्सिन नेपालमा ल्याइनेछ । यो ६० लाख डोज स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक क्षेत्रमा अग्र भागमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलगायतलाई प्रयोग गरिन्छ । भण्डारणको संरचना निर्माणदेखि खोप ल्याउन सम्म ४८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान छ ।
के नेपालमा खोप ल्याउन सहज छ त ? कस्तो तयारी आवश्यक छ ? हामीले जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तसँग कुराकानी गरेका छौँ:
खोप ल्याउन सरकारले तयारी तीव्र बनाएको भनिरहेको छ, सरकारले भनेजस्तो सजिलो छ ?
हो, नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता देखाएको छ । जतिसुकै कुराकानी गरे पनि ल्याउन पक्कै सहज छैन । यो सरलीकरण गर्ने कुरा पनि होइन । प्राक्टिकलमा आधारित भएर लाग्नुपर्छ । सार्वजनिक गर्दैमा हुने होइन । सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।
सरकारको तयारी पुगेन भन्न खोज्नुभएको हो ?
तीनवटा तहमा तयारी जरुरी छ । एकपछि अर्को गर्ने होइन । समानात्नर रूपमा तयारी हुनुपर्छ । कुन खोप ल्याउने निर्क्याेल भएको छैन । प्राविधिक रूपमा हामीले ल्याउन नसक्ने भनेको फाइजरको हो । माइनस ७० डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने भएकाले त्यो नेपालजस्ता देशहरूले चाहेर पनि ल्याउन सक्दैनन् । त्यसैले यतिखेर गर्नुपर्ने भनेको छनोटको हिसाबले उत्पादकहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने हो । एउटासँग मात्र होइन, जहाँजहाँ उत्पादन भइरहेको छ, सबै उत्पादकसँग छलफल तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ । जस्तै: उपभोक्ताको हिसाबले बजारमा जाँदा जसरी सामान छान्छौँ, त्यसैगरी खोप उत्पादकहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ । अर्को कूटनीतिक रूपमा पनि जानुपर्छ । हामीले एउटा मात्र गरेर हुँदैन । हामीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ ? के आधारमा कसरी दिने हो ? सोध्नुपर्छ । उत्पादकहरूले पनि अहिले आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न सक्दैनन् । उनीहरू पनि व्यापारी हुन् । कसलाई बेच्दा नाफा हुन्छ, त्यो हेर्छन् । हामीले धेरै सहयोग मागेर मात्र हुँदैन ।
सहयोग आउला भनेर बस्दा भोलि नेपालले खोप नपाउन सक्छ, के गर्न आवश्यक छ ?
कोभ्याक्सबाट आउने २० प्रतिशतबाहेक अरू किन्नैपर्छ । त्यसैले अहिले नै आर्थिक व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हो । किन्दा कति खर्च लाग्छ ? किन्न स्रोत कहाँबाट जुटाउने हो ? योतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ वा बाह्य सहयोग लिने हो, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने ठाउँसम्म गर्ने, भ्याएन भने बाह्य दाताहरूलाई भन्नुपर्छ ।
नेपाल मात्र होइन, विश्व नै महामारीको चपेटामा छ, अनि बाह्य सहयोग सजिलै आउला त ?
हो, अहिले सबै देश पीडित भएका छन् । बाह्य स्रोत जुटाउन सजिलो छैन । अरू प्रकोपमा जस्तो बाह्य स्रोत जुटाउन गाह्रो भएकाले नै आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भूकम्पको समयमा मागेका थियौँ । भूकम्प नेपालमा मात्र आएको थियो । कोरोना त विश्वमै छ । त्यसैले बाह्य स्रोतबाट सहयाेग जुटाउन गाह्रो छ ।
खोप बजारमा आइहाल्यो भने नेपालले व्यवस्थापन गर्न सक्ने संरचना देख्नुहुन्छ ?
खोप आउनु मात्र ठूलो कुरा होइन । पक्कै पनि व्यवस्थापनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको संरचनाले कति धान्छ ? नियमित खोपको कार्यक्रममा राख्ने कि छुट्टै खोपको कार्यक्रम गर्ने ? दशकौँदेखि लगाउँदै आएको खोप त समयमा लगाउन सकेका छैनौँ । घरदैलोमा लाने कार्यक्रम हुँदा पनि गर्न सकेका छैनौँ । अब आउने खोप प्राविधिक रूपमा कति सहज छ ? अहिलेको जनशक्तिले पुग्छ कि नयाँ थप्नुपर्छ ? भण्डारणको संरचना कस्तो छ ? यी सबै कुराको तयारी भएन भने खोप ल्याएर मात्र पनि हुँदैन ।
कुन भ्याक्सिन ल्याउने भन्नेमै अलमल छ नि ?
यसमा दुईवटा पाटो छन् । एउटा प्राविधिक पाटो हो । त्यो भ्याक्सिन कति सुरक्षित र प्रभावकारी छ, त्यो हेर्नुपर्‍यो । अहिले आकस्मिक प्रयोगका लागि स्वीकृति पाएको हो । कुनै कारणले साइड इफेक्ट भयो भने सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । दोस्रो भनेको आर्थिक नै हो । कुन भाउमा दिन तयार छ ? कुन सर्तमा दिने हो ? त्यो हेरेर खोप ल्याउने हो ।
नेपालमा परीक्षण नभएको खोप प्रभावकारी हुन्छ ?
अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको नयाँ जेनेटिक्स देखिएको छैन । हाम्रा लागि सुरक्षित र प्रभावकारी छ छैन भनेर विज्ञले हेर्नुपर्छ । अमेरिकाले ट्रायल गरेको भ्याक्सिन बेलायतले लियो । क्यानाडाले पनि स्वीकृति दियो । हाम्रोमा ट्रायल नभएकाले सरकारले कानुनी हिसाबले स्वीकृति दिनुपर्छ ।
बजारमा आउनेबित्तिकै सरकारले ल्याउन सक्ला ?
यो विगतमा सरकारले गरेको कामका आधारमा अनुमान गर्ने हो । सरकारले सोचेभन्दा अर्कै ढंगबाट गरेको छ भने भन्न सकिँदैन । विगतमा पनि थुप्रै प्रतिवद्धता सरकारबाट आए तर कार्यान्वयन थोरै मात्र भए । विगतको अनुभवले नेपाली बजारमा छिट्टै ल्याउन सहज छैन । सहज तरिकाले नेपाली नागरिकको पाखुरामा खोप पुग्छ कि पुग्दैन, विश्वस्त आधार बनेको छैन । आशा भने गर्नैपर्छ ।
खोप बन्यो भनेर अब ढुक्क हुने स्थिति बनेको हो ?
होइन, बेलायतमा पहिलो डोजको खोप लगाउन सुरू नै भइसक्यो । त्यति हुँदा पनि त्यहाँका विज्ञ डाक्टरहरूले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । आंशिक लकडाउन कायमै छ । मास्क नलगाउनेलाई कारबाही हुन्छ । खोप आएर मात्र समाधान हुने होइन । जनस्वास्थ्यको मापदण्ड भुल्नु हुँदैन । खोपको नाममा लापरबाही गर्नै हुँदैन ।
नेपालमा संक्रमण दर घटेको हो ?
हाम्रोमा राम्रो तथ्यांक नै छैन । त्यसैले अहिले नै निर्क्याेल गर्ने स्थिति छैन । नयाँ संक्रमितको संख्या घटेको छ । निको हुनेको संख्या बढेको छ । निको हुनेको संख्या बढ्नु र नयाँ संक्रमित थपिनुमा सम्बन्ध धेरै हुँदैन । निको हुनेको संख्या बढ्दा व्यवस्थापनमा भने सहज हुन्छ । संक्रमण घटेकै हो भन्ने कारण स्थापित भएको छैन । पोजिटिभ रेट १५ प्रतिशत माथि नै छ । १ सय जनाको परीक्षण गर्दा १५ जनामा पोजिटिभ देखिएको छ । संक्रमण घटेकै हो भन्ने आधार छैन । संक्रमणको दर एकातिर घट्दा मृत्यु घटेको छैन । गम्भीर बिरामी देखिन थालेका छन् । आईसीयू कक्ष भरिएका छन् ।
अझै संक्रमणको जोखिम कायमै छ ?
अहिले संख्या घटेकै रहेछ भने पनि फेरि नबढ्ला भन्न सकिन्न । हामी अझै संक्रमणको जोखिममा छौँ । जोखिमबाट हामी कोही पनि मुक्त भएका छैनौँ । साँच्चिकै संक्रमण घटेको रहेछ भने पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड ख्याल गरेनौँ भने फेरि संक्रमण बढ्छ ।
भन्नाले अर्को चरण आउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?
पक्कै हो । हामीले जनस्वास्थ्यको सुरक्षाको प्रावधानमा अभ्यास गरेनौँ भने अर्को लहर नआउला भन्न सकिन्न । फेरि संक्रमितको संख्या बढ्न सक्छ । कतिपय देशमा फेरि आएको छ । हङकङ, कोरिया, युरोपमा त्यस्तै छ । त्यसैले खोप आयो भनेर आउने दिनमा जोखिमबाट मुक्त भयौँ भन्ने मानसिकता राख्नु हुन्न ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २६, २०७७, १८:३६:००